Daawo 10 maalqabeen ee Hantidooda Ku Bixiya Arimaha Samafalka | Hawraar
Daawo 10 maalqabeen ee Hantidooda Ku Bixiya Arimaha Samafalka
Maalqabeenada adduunka ee heysta lacagta ugu badan ayaa siyaabo kala duwan loo arkaa iyadoo dadka intooda badan ay u arkaan dad isla weyni badan oo hantidooda ku bixiya waxyaabo khaldan , laakiin qaar ka mida ayaa sameeyay arrim lama filaan ah iyadoo hantidooda oo dhan ugu deeqay dadka baahan iyo hay’adaha samafalka.
Toddobaadkan waxaa soo baxay video ku saabsan 10-ka maalqabeen ee xoolaha ugu badan heysta, kuwaasoo hantidooda ugu deeqay hay’adaha samafalka. waxaana Liiskaasi soo galay saddex maalqabeen oo carab ah.
Waxaa ka mida ninka asaasay Facebook Mark Elliot Zuckerberg oo ku dhawaaqay in 99% hantidiisa uu ugu deeqay samafalka, waxaana hantidaas oo gaareysa 54 Bilyan oo doolar, iyadoo ay maamuleyso shirkad uu isagu leeyahay, taasoo dad badan shaki ka muujiyeen mar haddii hantida aanay gacantiisa ka baxeynin.
Amiirka reer Sacuudi ee Waliid Bin Dalaal ayaa isna ku jira liiska, isagoo ku tabarucay dhammaan hantidiisa inuu ku deeqo, lacagtiisa waxay gaareysaa 32 Bilyan oo doolar (soddon iyo laba kun oo Milyan doolar). Wuxuuna leeyahay hay;ad samafal oo magaciisa wadata, taasoo uu siiyay in ka badan 3 Bilyan oo doolar, waxaana lacagtaasi loo qeybin doonaa sanado.
Waxaa kaloo hantiilayaasha lacagtooda ugu deeqay arrimaha samafalka ka mida maalqabeenka caanka ah ee Sacuudiga laguna magacaabo Sheekh Suleymaan Ibn C/casiis Alraajixi, lacagtiisa waxay gaarysaa 7 Bilyan iyo 400 Milyan oo doolar, wuxuuna kala bar hantidiisa ugu deeqay samafal, waa ninka aasaasay Bankiga Raajixi oo ah kan ugu weyn bankiyada islaamka, wuxuuna ahaan jiray nin aad faqiir u ah.
Waxaa isna liisk ku jira Maalqabeenka caanka ah ee Bil Gates oo hantidiisu gaaryso 94 Bilyan oo doolar, isaga iyo xaaskiisa waxay hantidooda oo dhan ugu deeqeen samafalka, iyadoo caruurtooda aanay waxba ka heli doonin lacagtaasi, isagoo ugu horeeya dadka lacagaha ku bixiya arrimaha samafalka. Waana ninka ugu horeeya caalamka oo hantidiisa ku deeqa.
Maalqabeen u dhashay dalka Shiinaha Yu Pengnian oo ah 88 jir ka soo bilaabay nolosha meel eber ah, wuxuuna hantidiisa oo gaareysa 2 Bilyan oo doolar ugu deeqay dadka faqiirka ah, arrintaas oo ka yaabisay qoyskiisa.
Maalqabeenka kale ee u dhashay dalka Imaaraadka Carabta Cabdallaah Alcasiis ayaa ku jira liiskan hantiilayaasha lacagtooda geliyay samafalka, waxaana saddex meelood meel uu hantidiisa ugu deeqay hay’ad waxbarasho oo samafaleed, hantidiisa waxay gaareysaa 6 Bilyan iyo 400 Milyan oo doolar, waxayna ka dhigan tahay in lacag ka badan 2 Bilyan oo doolar uu ugu deeqay samafal.
Waxaa kaloo ka mida liiska dadka hantiilayaasha ah ee lacagtooda u wareejiyay arrimaha samafalka Maalqabeenka Gordon Moore oo in ka badan 2 Bilyan oo doolar ku bixiyay arrimaha samafalka.
Waxaa kaloo xusin mudan maalqabeenka reer India Azim Premji oo 8 Bilyan oo doolar u qoondeeyay arrimaha samafalka iyo dadka faqiirka ah. waxayna ka dhigan tahay in kala bar hantidiisa uu ku samafalay.